Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » UMboniso woBugcisa weHlabathi weHlabathi eKyoto
Indawo ephambili ye-ACK: IZiko leNkomfa yeHlabathi laseKyoto (ICC Kyoto)
Isandul' ukusungulwa phantsi komxholo othi "ubugcisa bale mihla kunye nentsebenziswano," Art Collaboration Kyoto (ACK) luhlobo olutsha lomboniso wobugcisa obanjelwe okokuqala eKyoto Prefecture. Ngomnye wemiboniso emikhulu eJapan ezinikele kubugcisa bale mihla kwaye iya kwenzeka IZiko leNkomfa yaMazwe ngaMazwe yaseKyoto ukususela ngoNovemba 5 ukuya kwi-7 emele phezu 50 iigalari ukusuka eJapan, eAsia, eYurophu nakuMntla nakuMzantsi Merika.
I-ACK igxininisa iintlobo ezine zentsebenziswano. Enye yintsebenziswano phakathi kweegalari zaseJapan neziphesheya kolwandle. Iigalari zaseJapan zinokunikezela ngokwabelana ngendawo yedokodo kunye neegalari zaphesheya kolwandle abanxibelelana nazo. Ngale ndlela, iintsingiselo zangoku zehlabathi zinokuphawulwa ngelixa kwangaxeshanye zinika amagcisa aseJapan ukuvezwa kumazwe ngamazwe. Enye iphakathi kwecandelo likarhulumente nelabucala. Uthethathethwano lukarhulumente luluncedo ekunciphiseni imirhumo enyukayo ngokubanzi ehambelana nemiboniso yezobugcisa, ngelixa uthatho-nxaxheba lwecandelo labucala liqinisekisa ubungcali ekuziseni ingqalelo kunye nombulelo kumagcisa abonisiweyo. Uhlobo lwesithathu lwentsebenziswano oluphuhliswe ngu-ACK lubonakaliswa kwinkqubo ye-ACK 'yomlawuli odibeneyo' obalulekileyo ekuphunyezweni komgangatho ophezulu wezobugcisa. Okokugqibela, ukuthatha ithuba lokuqokelelwa kweengcali zobugcisa zangoku, intsebenziswano emitsha kwamanye amacandelo, anje ngeteknoloji yedijithali okanye usetyenziso lwemizi-mveliso, inokulindelwa.
Indawo yobugcisa be-ACK iya kuququzelelwa kumacandelo amabini - I-Gallery Collaborations, ene-22 yaseJapan i-host host galleries kunye neegalari zabo ze-23 zeendwendwe zaphesheya, kunye neeNtlanganiso ze-Kyoto, ezijolise kwii-9 zegalari ezibonisa abaculi abadibeneyo base-Kyoto. Ukongeza, i-ACK iya kubamba ngaphaya kweKyoto kwindawo ekhululekileyo kwiZiko leNkomfa yeZizwe ngezizwe laseKyoto indawo ephambili elungileyo kunye neKyoto Okulandelayo kwi-intanethi ukomeleza amathuba okuhambisa ulwazi malunga nobugcisa bexesha laseKyoto phesheya kolwandle. Ubugcisa be-Kyoto, obususela kwi-crafts ukuya kwixesha langoku, bukwaboniswa kwezinye iinkqubo ezifana Eyenye iKyoto 2021, umnyhadala wobugcisa oququzelelwe yi-Kyoto Prefecture ebanjwe kwiindawo ezahlukeneyo kulo lonke elaseKyoto Prefecture, kunye neziganeko ezibanjelwe kwiSixeko saseKyoto.
I-ACK yahlehliswa ngenxa yobhubhani we-COVID-19. Ngoku iza kubanjwa kunye namanyathelo amiselweyo okuthintela usulelo. Ukuba iigalari zeendwendwe zinobunzima bokuhamba ukuya eJapan ngenxa yezithintelo ezinxulumene ne-COVID, iigalari zokwamkela iindwendwe ziya kwenza amalungiselelo kwaye zibonise imisebenzi yazo yobugcisa, ziqinisekisa iigalari zeendwendwe ubukho e-ACK. Iqonga ledijithali liya kwenza kwakhona ukufikelela kwi-intanethi kwi-ACK.